အမျိုးသမီးအသစ်တီထွင်မှုနှင့်အမျိုးသားဂီနီဝက်များ၏ယဉ်ကျေးမှုအပြုအမူ (၂၀၀၃) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
comments: နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက် Collodige အကျိုးသက်ရောက်မှု၏နောက်ထပ်ဥပမာ။
Braz J ကို Med Biol Res ။ 2004 ဇွန်; 37 (6): 847-51 ။ EPub 2004 မေလ 27 ။
Cohn DW ပါ, Tokumaru သည် RS, Ades ကို C.
Departamento က de Psicologia စမ်းသပ်, Instituto က de Psicologia, Universidad de Sao Paulo, ဆောပိုလို, SP, Brasil
လိင်ဝအထီးတစ်ဝတ္ထုအိမ်ထောင်ဖက်နဲ့အဆက်အသွယ်ထဲတွင်နေရာအခါပေါင်းများစွာကြွက်မျိုးစိတ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုတိုးဒါမှမဟုတ် recovery လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဂီနီဝက်များ (Cavia porcellus) ၏ပိုးပန်းခြင်းအပြုအမူအပေါ်အမျိုးသမီးအသစ်၏လွှမ်းမိုးမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အရွယ်ရောက်ပြီးယောက်ျားအထီးလေးယောက်သည်နေ့စဉ် ၁၅ မိနစ်ကြာလေးကြိမ်ပြုလုပ်စဉ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးနှင့်အတူတူ (အမျိုးသမီးအတူတူအစီအစဉ်များ) နှင့်လေ့လာမှုပြုခဲ့သည်။ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက်အမျိုးသမီးပြောင်းလဲခြင်းခံရသည်။ အပြုအမူအမျိုးအစားများ၏ကြာချိန်ကိုလေ့လာရေးဆော့ဝဲလ်ကို အသုံးပြု၍ ဗီဒီယိုတိတ်ခွေမှတ်တမ်းမှရရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးမှစ။ ဒုတိယအကြိမ်အထိ, အမျိုးသားအားလုံးသည်အမျိုးသမီးများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် (sniffing နှင့် licking) ခွဲဝေရန်အချိန်ကိုလျှော့ချပြီး၊ အမျိုးသမီးကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုတုန့်ပြန်မှုသည်တူညီသောအမျိုးသမီးအစည်းအဝေးများအဆုံးတွင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိပါ။ အလားတူလျော့ကျလာသောအလားအလာများစက်ဝိုင်းသို့မဟုတ် Rumba အမျိုးအစားတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည်လွန်ခဲ့သော (၈.၁၊ ၁၁.၉၊ ၁၅.၁ နှင့် ၁၇.၃ ရာခိုင်နှုန်းသော session အချိန်) မှပြောင်းလဲသောအမျိုးသမီးများ (၁၆.၄၊ ၁၈.၄၊ ၃၇.၁ နှင့် ၂၈.၉% အသီးသီးသောအချိန်ကာလ) အထိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့သည်။ အောက်ပါနှင့်စက်ဝိုင်းတိုးလာအထီးလေးယောက်ထဲကသုံးခုအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားသောနှင့်အထီးတ ဦး တည်းအတွက် mounting ၏အပြည့်အဝ - ပြန်လည်နာလန်ထူ။ စမ်းသပ်မှုတစ်လျှောက်လုံးတွင်အမျိုးသမီးများ၏အမျိုးသားများ (နောက်ဆက်တွဲတိုက်ခိုက်ခြင်း) အပေါ်တုံ့ပြန်မှုမှာတသမတ်တည်းပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ပါ။ ဤရလဒ်သည် guinea ဝက်ယောက်ျားတစ်ဦးချင်းအမျိုးသမီးအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ပိုးပန်းတုံ့ပြန်မှုအိမ်ထောင်ဖက်အသစ်အဆန်းကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လေ့ / ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုခံရစေခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။
Key ကိုစကားလုံးများကို: ပိုးပန်းအပြုအမူ, အမျိုးသမီးအသစ်အဆန်း, ဂီနီဝက်, Cavia porcellus
guinea ဝက်များ၏မျိုးပွားမှုစနစ် (Cavia porcellus) သည်မယားပြိုင်ထားသည့်စနစ်ဖြစ်ပြီးယောက်ျားများသည်တရားရုံးအမျိုးသမီးများ၊ ကိုယ် ၀ န်ရှိသူများကိုပင်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ကိုလိုနီများ၌တွေ့ခဲ့ရသည့်အမျိုးသားပိုးပန်းမှုအပြုအမူတွင်လူမှုရေးဆိုင်ရာစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းများပါဝင်ပြီးအမျိုးသမီးနောက်သို့လိုက်ကာအနီးကပ်ထိတွေ့မိသောအခါကိုယ်ခန္ဓာ၏နောက်ဘက်အပိုင်းဖြစ်သောရမ်ဘား (၁) ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာအနိမ့်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ အသံချဲ့ထားသည့် purr (၂.၃) ။ လွှမ်းမိုးသောယောက်ျားများသည်အမျိုးသမီးများအားလက်ဝါးကြီးအုပ်ချုပ်ကိုင်ထားပြီး၊ ခွဲများခွဲခြားထားသည့်ကြီးမားသောအုပ်စုများတွင်ရေရှည်လူမှုရေးနှောင်ကြိုးကို ၄ င်းတို့၏အဖွဲ့ခွဲများ (၄-၆) မှတည်ဆောက်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ချင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်နှောင်ကြိုးများသည်ဂီနီဝက်တို့၏လူမှုရေးဘဝတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ပြီးလူမှုဖွဲ့စည်းပုံတည်ငြိမ်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ အကျွမ်းတဝင်မရှိသောဝင်းအတွင်းတွင်အထီး guinea ဝက်များ၏ neuroendocrine စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်မှုကိုသိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အမျိုးသမီးတစ် ဦး တည်ရှိနေသော်လည်းထူးဆန်းသောမိန်းမတစ်ယောက်ရှိနေခြင်း (သို့) အကျွမ်းတဝင်မရှိသောအမျိုးသမီးမရှိခြင်းကြောင့်ထိခိုက်မှုအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံသည်အထီး guinea ဝက်၏လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများတည်ဆောက်ပုံအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်မေးခွန်းတစ်ခုမှာပိုးပန်းခြင်းအပြုအမူသည်အမျိုးသမီး၏အသစ်အဆန်းကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းရှိမရှိဖြစ်သည်။ ကြွက်များ (၉,၁၀) နှင့်ကြွက်များ (၁၁) ကဲ့သို့သောကြွက်မျိုးစိတ်များတွင်မူကားတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသတွင် (၁၂) တွင်မပါ ၀ င်ပါ။ လိင်အရအမူအကျင့်များတိုးပွားလာခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်နာလန်ထူလာခြင်းသည်လိင်မှုကိစ္စရှိသည့်အထီးများနှင့်ထိတွေ့မိသောအခါတွေ့ရှိနိုင်သည် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုဒါခေါ်မိတ်ဖက်။
Guinea ၀ က်တုံးကိုအထီးတစ်မျိုးစီကိုလိင်စိတ်မပြည့်မှီခင်ထိဖော်ထုတ်မည့်အစား၊ ၀ တ္ထု Coolidge မော်ဒယ်အရ ၀ တ္ထုအသစ်ကိုချက်ချင်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းကိုအမျိုးသားရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုအကဲဖြတ်မယ့်အစား၊ တစ်ရက်လျှင် ၁၅ မိနစ်စာမေးပွဲလေးခု၌တင်ပြခဲ့ပြီးပဉ္စမနှင့်နောက်ဆုံးနေ့အစီအစဉ်တွင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ရေရှည်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ဂီနီဝက်၏ပိုးပန်းအပြုအမူအတွက်အသစ်အဆန်း - သွေးဆောင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအကဲဖြတ်ရန်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အမျိုးသမီးအဆက်အသွယ်များပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်ချေကိုပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကိုလူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုများအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးဂီနီဝက်များတွင် estrus ကိုယောက်ျား၏သုက်ရည် (15) တွင်ပါ ၀ င်သောအချက်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပိုးပန်းအပြုအမူအပေါ်လေ့ - ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသက်ရောက်မှုများ၏အကဲဖြတ်ဘို့လိုအပ်သောအတော်လေးစဉ်ဆက်မပြတ်လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများယူဆခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်စိတ်ပညာ၏ဦးစီးဌာန (ဆောပိုလိုတက္ကသိုလ်) ၏ guinea ဝက်ကိုလိုနီများထံမှကိုယ်ဝန်နှောင်းပိုင်းအဆင့်မှအလယ်၌လေးအရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားပေါင်းလေးယောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်စမ်းသပ်မှုရဲ့အစမှာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှကျွမ်းတဝင်မရှိသောတို့သူတို့တစ်တွေမျိုးပွားအမျိုးသမီးတစ်ဦးမျိုးဆက်ပွားအထီးနှင့်သူတို့၏အမျိုးအနွယ်၏ရေးစပ်မိသားစုအုပ်စုများအတွက်ထားရှိမည်ခဲ့သည့်အတွက်သေတ္တာများအနေဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များကြိုတင်စမ်းသပ်ခြင်းမှတဦးတည်းတစ်ပတ်တစ်ဦးချင်းသျောခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအထီးထို့နောက်ကျပန်းက 15 x ကို 60 x ကို 90 စင်တီမီတာ box ထဲမှာလေးခုနေ့စဉ် 30 မိအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သောနှင့်အတူအမျိုးသမီးမှတွဲခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးကျပန်းကျန်နေသေးခဲ့ကြသည်ပဉ်စမနေ့၌, တစ်ဦးချင်းစီအထီးအခြားသုံး, ကျွမ်းတဝင်မရှိသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူတွဲလျက်ရှိ။
အစည်းအဝေးများဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြသည်နှင့်ယောက်ျားပေါင်းနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအမူအကျင့်အမျိုးအစားများ၏ကြာချိန်ဟာ EthoLog 2.2 စူးစမ်း software ကို (14) ကို အသုံးပြု. ဗီဒီယိုတိတ်ခွေမှတ်တမ်းများမှရရှိသောခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရွေးချယ်အထီးပိုးပန်းအမျိုးအစားခဲ့ကြသည်:, (အမျိုးသမီးတစ်ဝှမ်းစက်ဝိုင်းထဲမှာရွေ့လျား) ကိုဝိုငျးအမျိုးသမီးကအောက်ပါ, (အမျိုးသမီး sniffing နှင့်ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့) စုံစမ်းစစ်ဆေး, (ထို purr အသံနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ Swing လှုပ်ရှားမှုများကိုဖျော်ဖြေ) rumba နှင့် mounting (ထို mounting copulatory လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲအမျိုးသမီး,) ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရွေးချယ်အမျိုးသမီးပိုးပန်းအမျိုးအစားခဲ့ကြသည်: စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း (အထီး sniffing နှင့်ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့) နှင့် (အထီး rebuffing သို့မဟုတ် aggressing) တိုက်ခိုက်ခြင်း။ ဒေတာကိုတစ်ကဏ္ဍဖျော်ဖြေသုံးစွဲရာခိုင်နှုန်းက session ကိုအချိန်အဖြစ်အစီရင်ခံရသည်။ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ display ကိုအလွန်အတိုချုပ်ခဲ့ကြပြီးကတည်းက, သူတို့ရဲ့ကြိမ်နှုန်းအစားရာခိုင်နှုန်းခန့်အချိန်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အထီး 2-အမျိုးသမီး2pair တစုံတူညီ-အိမ်ထောင်ဖက် session တစ်ခု 1 ကာလအတွင်းလုံးဝမလှုပ်ရှိနေဆဲကတည်းကဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးစွန့်ပစ်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့် session တစ်ခု2သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအပြန်အလှန် session တစ်ခုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
အဆိုပါရလဒ်များဒုတိယအစည်းအဝေးများမှပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်, ခပ်သိမ်းသောအထီးဘာသာရပ်များ (ပုံ 1), စုံစမ်းစစ်ဆေးအောက်ပါနှင့် mounting မှခွဲဝေအချိန်ကိုလျော့နည်းသွားကြောင်းပြသပါ။ Rumba နှင့်ဝိုငျးအဆိုပါအစည်းအဝေးများတစ်လျှောက်ကြာချိန်အတွက် patterned အပြောင်းအလဲမပြခဲ့ပါဘူး။ 1 မှအစည်းအဝေးများ4ထံမှ rumba မှခဲ့သည်ကျိန်ရာခိုင်နှုန်းက session ကိုအချိန်: 0, 1.1, 1.1, 1.7 (အထီး 1); 0, 0, 0.2 (အထီး 2); 5.3, 3.2, 3.5, 1.4 (အထီး 3); အသီးသီး 3.4, 6.6, 8.6, 2.4 (အထီး 4) ။ ကိုဝိုငျးမှမြှုပ်နှံရာခိုင်နှုန်းက session ကိုအချိန် 0.2, 0, 0, 3.4 (အထီး 1) ရှိ၏ 0, 2.0, 2.0, 0.3 (အထီး 2); 15.9, 1.0, 1.0, 0.9 (အထီး 3); အသီးသီး 4.2, 0.9, 0.5, 8.8 (အထီး 4) ။
အမျိုးသမီး switching အားလုံးယောက်ျားအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးတစ်ဦးပြန်လည်နာလန်ထူအကြောင်းကိုဆောင်ခဲ့လေ၏။ အထီး 1,2နှင့်34 မှအစည်းအဝေးများ5ကနေဝိုငျးတစ်ခုတိုးပြ 1,2နှင့် 4, အောက်ပါတစ်ခုတိုးကူထီး။ အထီး 1 (ပုံ 1) mounting ၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ကိုပြသ။
အမျိုးသမီးရာခိုင်နှုန်းခန့်အချိန်အတွက်လျှောက်လျော့နည်းမပြခဲ့ဘူးသူတို့အတူတူပင်အထီးထိတွေ့ခဲ့ပြီးသောအတွက်အစည်းအဝေးများတစ်လျှောက်လုံးအားစုံစမ်းစစ်ဆေးနေခဲ့ရသည်။ အစည်းအဝေးများ 1 ထံမှ4မှစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးရန်ကျိန်ရာခိုင်နှုန်းက session ကိုအချိန် 4.6, 4.2, 5.7, 2.2 (အမျိုးသမီး 1) ရှိ၏ 0, 0.7, 1.2, 0.3 (အမျိုးသမီး 2); 3.2, 8.8, 2.7, 2.7 (အမျိုးသမီး 3) ။ ; အသီးသီး 2.3, 2.4, 1.5, 3.2 (အမျိုးသမီး 4) ။ သာအမျိုးသမီး3ပဉ္စမ session တစ်ခုအတွက်ဝတ္ထုအထီး (3.0 ရာခိုင်နှုန်းက session ကိုအချိန်) နှင့်ထိတွေ့သည့်အခါစုံစမ်းစစ်ဆေးတိုးတက်လာခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးများကကြိမ်နှုန်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အနိမ့်ခဲ့လေ့အစည်းအဝေးများတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးစနစ်တကျပုံစံကိုလိုက်နာခြင်းမရှိပေ။ အဆိုပါလှိုင်း 1.0, 1.0, 1.0,0(အမျိုးသမီး 1) ကြ၏ 0, 4.0, 2.0, 1.0 (အမျိုးသမီး 2); 0, 0, 1.0, 1.0 (အမျိုးသမီး 3), နှင့်အသီးသီး 7.0, 1.0, 1.0, 2.0 (အမျိုးသမီး 4) ။ အမျိုးသမီး2(ကြိမ်နှုန်း: 10.0) နှင့်အမျိုးသမီး4(ကြိမ်နှုန်း: 7.0) session တစ်ခု5အတွက်အသစ်တခုအထီးနှင့်အတူရင်ဆိုင်သည့်အခါတိုးလာတိုက်ခိုက်ခြင်းအပြုအမူပြသခဲ့သည်။
အဆိုပါလေ့ပုံစံ, အမျိုးသမီးမှထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုတစ်လျှောက်လုံး investigatory နှင့်ယောက်ျားပေါင်း၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ကျဆင်းခြင်းများကလေ့လာတွေ့ရှိအဖြစ်ကတိရစ္ဆာန်များ၏အားလုံးသို့မဟုတ်အရှိဆုံးနှင့်အများအပြားပိုးပန်းအမျိုးအစားထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကတည်းကအလုံအလောက်ကြံ့ခိုင်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ဤအပြောင်းအလဲများကိုစနစ်တကျမဟုတ်ကြသောကြောင့်, အမျိုးသမီးအပြုအမူအတွက် session ကိုပြောင်းလဲမှုတစ်ခု session တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမရနိုင်ပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ကျဆင်းခြင်း၏နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေအနက်ကအမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဖက်အသစ်အဆန်း၏ရက်ကနေရရှိလာတဲ့ပိုးပန်းဖို့ lordosis, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးလေ့နှင့်အတူတုံ့ပြန်မထားတဲ့အတွက်အခြေအနေမှာကြိုးစားမှုပိုးပနျးမြားနှငျ့ copulating ၏မျိုးသုဉ်းကိုကိုယ်စားပြုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ယောက်ျားများ၏ပိုးပန်းစွမ်းဆောင်ရည် Recovery ကိုပု switched-အိမ်ထောင်ဖက် session တစ်ခုအတွင်းမှာတချို့အမျိုးအစားထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုသို့သောပြန်လည်နာလန်ထူ guinea ဝက်များတွင်ပိုးပန်းအမျိုးသမီး၏အသစ်အဆန်းထိန်းချုပ်ထားစေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။ အထီးအကျွမ်းတဝင်တဦးတည်းအနေဖြင့်ဝတ္ထုအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမပြုခဲ့ပါလျှင်ပိုးပန်းနှင့်လူမှုရေးတူးဖော်ရေးအတွက်တိုးမြှင့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းကိုမဟုတ်ဘူး: ဒါဟာအစ guinea ဝက်အထီးသူတို့အပြန်အလှန်အရာနှင့်အတူအမျိုးသမီးအသိအမှတ်မပြုထားတဲ့အရိပ်အယောင်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။
လက်ရှိရလဒ်များသည် guinea ဝက်များအကြားတစ် ဦး ချင်းအသိအမှတ်ပြုမှုဆိုင်ရာအခြားအစီရင်ခံစာများနှင့်သဘောတူသည်။ ပြည်တွင်း (C. porcellus) နှင့်ရိုင်း (C. aperea) အရွယ်ရောက်ပြီးသူ guinea ဝက်နှစ်မျိုးလုံးသည်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သော conspecifics (15-18) ကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်ကြောင်းအထောက်အထားရှိသည်။ Beauchamp နှင့် Wellington (19) တို့ကအထီး guinea ဝက်များသည်အထွေထွေအမျိုးသမီးများ၏ဆီးစစ်ဆေးမှုကိုထပ်ခါတလဲလဲတင်ဆက်မှုများ၌လျော့နည်းသွားကြောင်းတင်ပြခဲ့သည်။ ပထမတင်ဆက်မှုသည် ၂ မိနစ်မျှသာဖြစ်ပြီးဒုတိယတင်ဆက်မှုကိုနှောင့်နှေးခြင်းသည် ၇ ရက်သာကြာ ။ အလားတူလေ့ - ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသက်ရောက်မှုများကဲ့သို့သောကြွက်ကဲ့သို့သောကြွက်မျိုးစိတ်များအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ နဂိုအတိုင်းနှင့်ဓားသွားခံထားသောမုန့်များသည်အမျိုးသမီးအင်္ဂါဇာတ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ခြင်းသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအလေ့အကျင့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး မှအနံ့ဆိုးများကိုအနံ့ခံခြင်းသည်အထီးကျန်ဆန်သောအမျိုးသားအားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု (၂၀) ​​တွင်မသမာမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အမျိုးသားများအားလုံးသည်ပြောင်းလဲသွားသောအမျိုးသမီးကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းသို့မဟုတ် Rumba အပြုအမူများပြသခြင်းကိုပြသနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းအမျိုးသမီး ၀ တ္ထုကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်းတို့တွင်ပုံမှန်တိုးပွားလာသည်။ အမျိုးအစားခွဲခြားထားသောအထီး guinea ဝက်များ၏ပုံမှန်ပိုးပန်းရန်ဖြစ်သည်။ အထီး ၁ ၏အပြုအမူသည် (switched) အမျိုးသမီး 1 နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိခြင်းကြောင့်အနည်းဆုံးအချို့ကိစ္စများတွင်ပြန်လည်နာလန်ထူလာနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဂီနီဝက်များသည်အစမ်းလေ့ကျင့်မှုအခြေအနေတွင်ပြန်လည်လေ့လာသူများကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ပထမနှင့်ပဉ္စမအကြိမ်များ၌အမျိုးသမီး ၂ နှင့် ၄ တို့မှပြုလုပ်ခဲ့သောတိုက်ခိုက်မှုအပြုအမှုသည်အထီးအသစ်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိနိုင်သည်။ ယောက်ျားသည်အကျွမ်းတဝင်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်ဝတ္ထုများမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ၊ ယောက်ျား၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။ ပိုးပန်းရန်ဇာတ်လမ်းတွဲထဲဝင်ရန်အမျိုးသမီးအဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းတွင်အထီးသစ်၏အခန်းကဏ္assessကိုအကဲဖြတ်ရန်သင့်လျော်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုအမျိုးသမီးအသစ်အဆန်း၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ပိုးပန်းတုံ့ပြန်မှုများလေ့ / နာလန်ထူတစ်ဦးလုပ်ငန်းစဉ်၏အထီး guinea ဝက်အတွင်းတည်ရှိမှုဖော်ပြသည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများအမျိုးသမီးအသစ်အဆန်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုလည်းလူမှုရေးအရပိုမိုရှုပ်ထွေးနှင့်သဘာဝအခြေအနေများတွင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိမရှိညွှန်ပြလိမ့်မည်။
ကိုးကား 1 ။ ရှငျဘုရငျဂျေအေ (1956) ။ Semi-ကသဘာဝအခြေအနေများအောက်တွင်နေထိုင်ပြည်တွင်း guinea ဝက်၏လူမှုဆက်ဆံရေး။ ဂေဟဗေဒ, 37: 221-228 ။ [Links များ]
2 ။ Berryman JC (1976) ။ ဂီနီဝက်အသံ: ၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံ, causation နှင့် function ကို။ 41-80: Zeitschrift Tierpsychologie, 106 သားမွေး။ [Links များ]
3. Monticelli P & Ades ကို C (2001) ။ အိမ်မွေးမြူခြင်း၏အသံဆိုင်ရာရှုထောင့်များ - ရိုင်းနှင့်အိမ်တွင်းအခေါင်းပေါက်များတွင်သတိပေးခြင်းနှင့်ပိုးပန်းခြင်း၏အသံအချက်ပြချက်များ။ Ethology တွင်တိုးတက်မှုများ၊ ၃၆: ၁၅၃ (Abstract) ။ [လင့်ခ်များ]
4 ။ Jacobs WW (1976) ။ ပြည်တွင်း guinea ဝက်များတွင်အထီး-အမျိုးသမီးအသင်းအဖွဲ့များ။ တိရိစ္ဆာန်သင်ယူနှင့်အပြုအမူ, 4: 77-83 ။ [Links များ]
5 ။ Sachser N ကို (1986) ။ guinea ဝက်အတွင်းအမြင့်အနိမ့်လူဦးရေသိပ်သည်းဆမှာလူမှုရေးအဖှဲ့အစညျး၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ။ အပြုအမူ, 97: 253-272 ။ [Links များ]
6 ။ Sachser N ကို (1998) ။ sociophysiology အတွက်လေ့လာမှုများ, မွေးမြူနှင့်လူမှုရေးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်: ပြည်တွင်းနှင့်ရိုင်း guinea ဝက်၏။ Naturwissenschaften, 85: 307-317 ။ [Links များ]
7. Sachser N, Durschlag M & Hirzel: D (1998) ။ လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏စီမံခန့်ခွဲမှု။ Psychoneuroendocrinology, 23: 891-904 ။ [လင့်ခ်များ]
8 ။ Henessy ကို MB (1999) ။ guinea ဝက်အတွက် endocrine လှုပ်ရှားမှုအပေါ်လူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု: nonhuman မျောက်ဝံများအတွက်တွေ့ရှိချက်မှနှိုင်းယှဉ်နှင့်အတူလေ့လာမှုများ။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်သုံးသပ်ချက်များ, 23: 687-698 ။ [Links များ]
9. Lisk RD & Baron, G (1982) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှုကိုမိတ်လိုက်ခြင်းအပြီးတွင်မိတ်လိုက်ခြင်းတည်နေရာနှင့်မိတ်လိုက်မိတ်ဖက်အသစ်များအားလက်ခံခြင်း၏အမျိုးသမီးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း - Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ရွှေရောင်ရွှေစိုင်တွင်ထင်ရှားသည်။ အပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဇီဝဗေဒ, 36: 416-421 ။ [လင့်ခ်များ]
10. Johnston RE & Rasmussen K ကို (1984) ။ အထီးအမများကအမျိုးသမီးဟမ်းစ်တာများကိုတစ် ဦး ချင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်း - ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် olfactory နှင့် vomeronasal စနစ်များ၏အခန်းကဏ္။ ။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ, 33: 95-104 ။ [လင့်ခ်များ]
11. Bermant, G, Lott DF & Anderson က L (1968) ။ အထီးကြွက် copulatory အပြုအမူအတွက် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ယာယီဝိသေသလက္ခဏာများ။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ဇီဝကမ္မစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 650: 447-452 ။ [လင့်ခ်များ]
12. ပီယပ် JD, Obrien KK & Dewsbury DA (1992) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Microtus ochrogaster) တွင် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ကျွမ်း၏အဘယ်သူမျှမအကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychonomic အသင်း၏သတင်းလွှာ၊ ၃၀: ၃၂၅-၃၂၈ ။ [လင့်ခ်များ]
13. Roy MM, Goldstein KL & Williams C (1993) ။ အမျိုးသမီး guinea ဝက်များတွင်ကူးစက်ပြီးနောက် Estrus ရပ်စဲ။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ၊ ၂၇း၃၉၇-၄၀၂ ။ [လင့်ခ်များ]
14. Ottoni EB (2000) ။ EthoLog 2.2: ကူးယူခြင်းနှင့်အပြုအမူလေ့လာခြင်းအစည်းအဝေးများ၏အချိန်ကိုက်များအတွက် tool တစ်ခု။ အပြုအမူသုတေသန, နည်းလမ်းများ, တူရိယာ & ကွန်ပျူတာများ, 32: 446-449 ။ [လင့်ခ်များ]
15 ။ Beauchamp GK (1973) ။ conspecific ဆီးမှအထီး guinea ဝက်၏ဆွဲဆောင်မှု။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ, 10: 589-594 ။ [Links များ]
16 ။ Ruddy ll (1980) ။ guinea ဝက် (Cavia porcellus) ကကိုလိုနီအိမ်ထောင်ဖက် anogenital အနံ့အကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှု။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ဇီဝစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 94: 767-774 ။ [Links များ]
17. Martin IG & Beauchamp GK (1982) ။ အထီး cavies (Cavia aperea) ကတစ် ဦး ချင်းစီ၏ Olfactory အသိအမှတ်ပြုမှု။ ဓာတုဂေဟဗေဒ၏ဂျာနယ်, 8: 1241-1249 ။ [လင့်ခ်များ]
18. Drickamer LC & Martan J (1984) ။ အထီးအိမ်တွင်း guinea ဝက်များတွင်အမွှေးအကြိုင်ခွဲခြားခြင်းနှင့်လွှမ်းမိုးခြင်း။ အပြုအမူဖြစ်စဉ်များ, 27: 187-194 ။ [လင့်ခ်များ]
19. Beauchamp GK & Wellington JL (1984) ။ တစ် ဦး ချင်းစီ၏အနံ့များကိုအတိုချုပ်၊ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ, 32: 511-514 ။ [လင့်ခ်များ]
20. Havens MD & နှင်းဆီ JD (1992) ။ ရွှေဟမ်းစ်များ၏အကျွမ်းတဝင်နှင့်အသစ်ဖြစ်သော chemosensory လှုံ့ဆော်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ၊ ၂၆း၅၀၅-၅၁၁ ။ [လင့်ခ်များ]